Non-Slip စူပါကိုင်တွယ်ထားသည့်ကားရပ်ထားသည့်အထောက်အပံ့ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
$30.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $50.99
မှစ. သင်္ဘောများ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဂျာမနီ ရုရှားပြည်ထောင်စု စပိန် အီတလီ တရုတ်နိုင်ငံ ပြင်သစ်
အပြာရောင် / အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အပြာရောင် / ဂျာမနီ အပြာရောင် / ရုရှဖက်ဒရေးရှင်း အပြာရောင် / စပိန် အပြာရောင် / အီတလီ အပြာရောင် / တရုတ် အပြာရောင် / ပြင်သစ်
Non-Slip စူပါကိုင်တွယ်ထားသည့်ကားရပ်ထားသည့်အထောက်အပံ့ - Blue / United States backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
item အမြင့်: 3.5cm
item အလျား: 22cm
item အလေးချိန်: 403g
item အကျယ်: 9.5cm
ပစ္စည်း: PVC + ABS
အရောင်: အပြာရောင်၊ အနီရောင်
အလေးချိန်: 400g အကြောင်းကို
လုပ်ဆောင်ချက် - ကားတံခါးလက်မောင်း၊ ကားလုံခြုံရေးသံတူ၊ ထိုင်ခုံခါးပတ်ကိုဖြတ်
အသုံးပြုမှု - ကားတံခါးအများစုအတွက်သင့်တော်ပြီး၎င်းသည်အပိုသြဇာသက်ရောက်သည်။ (ကားကြံမ ၀ ယ်မီ၊ သင်၏ကားတွင်တံခါးခေါက် / သော့ခလောက်ရှိစေရန်နှင့်တံခါးဘောင်သို့သော့ခလောက်သို့မဟုတ်ဝက်အူနှစ်ခုဖြင့်သေချာအောင်ထားပါ)
ချော်ခြင်းမဟုတ်သောဒီဇိုင်း - သင်ကသဘာဝအရဆုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အပြင်လက်ဖဝါးနှင့်လက်ချောင်းများ၏ပုံသဏ္forာန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ချော်ခြင်းမရှိသောမျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ချော်ခြင်းမရှိဘဲသက်သောင့်သက်သာခံစားမှုကိုသေချာစေသည်
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း - ၎င်းကိုအိတ်ဆောင်သို့မဟုတ်လက်ကိုင်အိတ်ထဲတွင်ထည့်နိုင်သည်။ အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးအကူအညီပေး!
အကြမ်းခံ; နှင့်ထုတ်ကုန်လုံခြုံသံတူ function ကိုရှိပါတယ်
သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ဒဏ်ရာရသူများ (သို့) အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်သူများအတွက်သင့်တော်သည်
1 * အိတ်ဆောင် Car Cane
ငါ anfang gar nicht geglaubt, aber funktioniert einwandfrei, စူပါ
ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဂရိတ် item ကျေးဇူးတင်ပါတယ်